Vanorarama neKukumbira Rubatsiro Vovhiringwa neCovid-19 muZimbabwe
Vamwe vasingaoni vanorarama nekukumbira mari mumabhazi nemumigwagwa kwaRusape vanoti vari panguva yakaoma sezvo hurumende yakambomisa kufamba kwemabhazi aya senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCoronavirus.
Mumwe wevanhu ava, VaTymon Rukuni vekwaRusape, vanoti kubva nemusi weSvondo apo vakapedzisira kupemha mubhazi, ndiwo musi wavakapedzisira kudya rinopisa nevana vavo vatanhatu, sezvo vasingawani kwekupemhera nekuti muguta hamuchina vanhu ukuwo kumabhazi havachadiwiko nekuda kwechirwere che-COVID-19.
"Tine mhuri nine dzinorarama nekupemha asi nekuda kwechirwere cheCoronavirus hapachina kana chichabuda nekuti mumabhazi hakuchina, chikafu hatichina nekuti kumabhazi hatichadiwi kuti tifambe ikoko. Toita seyiwo nhai," vanodaro VaRukuni.
Amai Rejoice Chinembiri vekwaRusape vanoti nekusafamba kwemabhazi panguva ino, hakuna kumwe kwavanotarisira kuwana mari kunze kwekufamba nemabhazi iwaya vachikumbira rubatsiro.
'Tinosipinda mumabhazi tikukumbira, towana tumari totenga tuhupfu tuTsunami nemuriwo todya nevana kumba. Zvino izvezvi mabhazi akamiswa hatina kana pekutangira. Tamboenda kwaMP wedu kuti tibatsirwe tikazoenda kuSocial Welfare asi tangonyorwa mazita hatina kupihwa kana chipunu chehupfu chaicho," Amai Chinembiri vanotsanangura.
VaNhamo Makusha vanoti sevanhu vanorara nechavawana musi iwoyo, hapana zvazvichareva kana vachirambidzwa kupemha munzvimbo dzemuguta kana mumadutavanhu sezviri kuitika panguva ino yeLockdown.
"PaLockdown apa patidhisiadhivhandeja nekuti sevanhu vanotsvaga mumabhazi, nekuti hatina chatinacho, zvichireva kuti takapedzisira kupemha Sunday apo pakaguma kufamba mabhazi acho uye pari zvino hatichabvumirwi kukwira mabhazi acho, takapedzisira kudya musi iwoyo weSunday," vadaro VaMakusha
Mumiriri weMakoni Central mudare reparemende, VaDavid Tekeshe, vanoti vari kuedza nepavanogona napo kuti mhuri dzevasingaoni idzi dziwane rubatsiro asi zviri kutora nguva refu.
"Ndatouya nemuriwo izvezvi kwavari ndichiti pamwe vangabatsirikana sezvo vange vakanzi vanokwanisa kubatsirwa kumapurisa asi hapana chabuda ikoko vakanzi vaende kuWelfare asi vangonyorwa mazita chete pasina chabuda. Vanhu ava vanoti vakapedzisira kupemha Sunday apo vakakwanisa kutenga katsaona kekudya musi wacho. Vanhu ava vari pa desperate havana chekudya vanotoda rubatsiro," vanodaro VaTekeshe.
Dambudziko rakatarisana nevanhu ava idambudziko rakatarisanawo nevanhu vakawanda munyika yose vanga vachipona nekukumbira rubatsiro mumigwagwa nemumabhazi.
Zimbabwe ine vanhu vangangosvika zviuru mazana mashanu vasingaoni, vazhinji vavo vachipona nekukumbira rubatsiro sezvo munyika musina mabasa akawanda nepamusana pekuparara kwaita hupfumi hwenyika.